विजयप्रसाद मिश्र - कान्तिपुर समाचार
पछिल्लो समय प्रदेश नं. २ को नामकरण के गर्ने र राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने चर्चा चुलिएको छ । मधेस केन्द्रित पार्टीहरू बीचमा यसमा एकमतैक्य छैन । मधेस नभएर मिथिला राख्नुपर्ने कुरा पनि चलिरहेको छ । मिथिला वा विदेह राज्य नामकरण भोजपुरावासीले नस्वीकार्ने देखिन्छ ।
मधेसका युवा अन्योलमा छन् । सरकारमा रहेका वा सरकारलाई समर्थन गरेका मधेस केन्द्रित दलका अगुवाबाट आशा गर्न छाडेका छन् ।
गाउँहरूको चाहना– पुनर्जागरण
नेपाललाई गाउँ नै गाउँले बनेको देश भनिन्छ । तर अहिले गाउँहरू उजाड भएका देखिन्छन् । लगातार भएको निर्वाचनमा नेताहरू गाउँ–गाउँ पुगेर गाउँलेहरूलाई ठूलठूला आश्वासन बाँडेर आएका छन् । त्यसले गाउँलेहरूमा फेरि एकपटक आशा पलाएको छ । तर के गाउँको विकास होला ?
विजयप्रसाद मिश्रका लेखहरु :